I-Flatbed Laser Cutter - MimoWork
Izembatho Nezindwangu Zasekhaya
Ukukhangisa & Izipho
Izinsiza kusebenza zangaphandle
Izixazululo Zethu ze-Laser
Contour Laser umsiki
Umaka we-GALVO Laser
Uhlelo Lokuqashelwa KweMimo Contour
Uhlelo Lokuqashelwa Kwekhamera le-CCD
Uhlelo Lokufanisa Isifanekiso
Umxhumanisi We-Laser System
IMIMOWORK INDLELA YOKUSIKA ENGENAKUTHI YOKWENZA ABENZI
Thungatha izinhlelo zakho zokusebenza, i-flatbed CNC laser plotter enamandla iqinisekisa ikhwalithi yezicelo ezifuna kakhulu. Idizayini ye-X & Y gantry iyisakhiwo semishini esizinzile futhi esiqinileokuqinisekisa imiphumela yokusika ehlanzekile nengaguquguquki. Umsiki ngamunye we-laser angakwazi ukwenza lokhucubungula izinto ezahlukahlukene.
Buka Bonke Abasiki Be-Laser Ababhangqiwe
Amamodeli we-Laser Flatbed Laser Athandwa Kakhulu
I-CO2 Flatbed Laser Cutter 160
I-MimoWork's Flatbed Laser Cutter 160 iyindawo yethu yokusika i-laser cutter enetafula elisebenza ngokuhambisa elenzelwe ukusika izinto ezigoqekayo ezifana nendwangu, isikhumba, intambo, njll. ikusize uqoqe izingcezu zokusika kalula. Ngaphezu kwalokho, izinketho ezimbili ze-laser-head nezine-laser-head ziyatholakala ukukhulisa kaningi ukusebenza kwakho okuhle kokukhiqiza.
Indawo Yokusebenzela (W * L): 1600mm * 1000mm (62.9 ”* 39.3”)
Amandla e-Laser: 100W / 150W / 300W
CO2 Flatbed Laser umsiki 160L
Ngefomethi yokusika engu-1600mm * 3000mm, i-Flatbed Laser Cutter 160L yethu ingakusiza usike amaphethini wokuklanywa kwefomethi enkulu. Idizayini yokudlulisa i-Rack & Pinion iqinisekisa ikhwalithi nokuzinza kwenqubo esebenza isikhathi eside. Noma ngabe usika indwangu yesisindo esincane kakhulu noma izindwangu zobuchwepheshe eziqinile njengeCordura neFibre Glass, umshini wethu wokusika we-laser ungaphatha noma iziphi izinkinga zokusika kalula.
Indawo Yokusebenzela (W * L): 1600mm * 3000mm (62.9 `` * 118 '')
I-CO2 Flatbed Laser Cutter 140
I-MimoWork's Flatbed Laser Cutter iyisayizi evame kakhulu yokusebenza kwe-laser emkhakheni wokukhangisa nowezipho. Ngokutshala imali okuncane, ungasika futhi uqophe izinto eziqinile bese uqala ibhizinisi lakho lomhlangano ukuze wenze izinto ze-acrylic nezokhuni ezifana namaphazili okhuni nezipho ze-acrylic zezikhumbuzo. Idizayini yokugijima ngaphambili nangasemuva iyenza itholakalele ukucubungula izinto ezinde ukwedlula indawo yokusika.
Indawo Yokusebenzela (W * L): 1400mm * 900mm (55.1 ”* 35.4”)
Amandla e-Laser: 100W / 150W
CO2 Flatbed Laser umsiki 130L
Okwezinto ezinamafomethi amakhulu, i-Flatbed Laser Cutter 130L yethu ingukukhetha okuhle. Kungakhathaliseki ukuthi i-billboard engaphandle ye-acrylic noma ifenisha yokhuni, umuntu udinga umshini we-CNC ukuletha ukucacisa okuphezulu nemiphumela emihle yokusika ikhwalithi. Isakhiwo sethu semishini esithuthuke kakhulu sivumela ikhanda le-laser gantry ukuthi lihambe ngesivinini esikhulu ngenkathi liphethe ithubhu ephezulu yamandla phezulu. Ngenketho yokuthuthukela kwi-Mixed Laser Head, ungasika izinto zensimbi nezingezona ezensimbi ngaphakathi komshini owodwa.
Indawo Yokusebenzela (W * L): 1300mm * 2500mm (51 ”* 98.4”)
Amandla e-Laser: 150W / 300W / 500W
Singumlingani wakho we-laser okhethekile!
Xhumana nathi nganoma yimuphi umbuzo, ukubonisana noma ukwabelana ngolwazi
Umhlinzeki Wakho We-Laser Onokwethenjelwa
Cha. 840 Chengliu Hwy, Isifunda saseJiading, eShanghai, eChina
Ukubuka konke kwento
Ukubuka konke kohlelo lokusebenza